Ahoana no fisafidianana “tapis” atao ao an-trano
Mitondra endrika ho an’ny efitrano iray ny karipetra izay apetraka ao aminy. Maro karazana izy ireny fa ahoana kosa ny fomba hisafidianana azy?
1. Mampitony kokoa rehefa loko iray ihany no ampiasaina mba entina hanaingoana ilay hazonoely fotsy. Izay loko safidiana dia mety avokoa saingy tsy atao be loatra izany. Eto dia ny loko mavokely no nampiasaina, izay azo soloina mena, lokom-bolafotsy na ranom-bolamena ihany koa.
2. Raha mampiasa loko mihoatra ny iray kosa dia tsy atao mifanalavitra loatra ireo loko. Ny manga sy ny maitso izao mifanaraka, toy ny eto amin’ny sary ary nampiarahina tamin’ny “boules” miloko ranom-bolamena izany.
Tsy tsara raha atao be loatra ny loko amin’ny hazonoely fotsy fa mavesatra loatra indray na antsoina hoe “surchargé” ka tsy mamoaka ny endriny.